maitiro ekunyora nyaya dzakanaka dzevashandisi
Kuru Agile Sei Kunyora Kwakanaka Agile Mushandisi Nhau
Sei Kunyora Kwakanaka Agile Mushandisi Nhau
Imwe yematanho ekutanga mukuendesa chigadzirwa chemhando yepamusoro, iri kunyora nyaya dzakanaka dzevashandisi. Mune ino posvo, isu tinotsanangura nzira yekunyora yakanaka mushandisi nyaya uye chii chinofanira kuverengerwa.
Nyaya yemushandisi inzvimbo yekutora mashandiro echigadzirwa uye sezita zvarinoratidzira, nyaya dzevashandisi dzinotsanangura mashandisiro anoita mutengi kana mushandisi chigadzirwa.
Nyaya yemushandisi inomiririra chidimbu chidiki chekuita icho chine kukosha kwebhizinesi iyo timu inogona kuendesa mune yekumhanya. Musiyano uripo pakati penyaya yemushandisi uye yechinyakare gwaro rinodiwa idanho rehuwandu.
Zvinodikanwa zvinyorwa zvinowanzo kuve nezvakawanda zvemavara uye zvakanyatsotsanangurwa, nepo nyaya dzevashandisi dzichinyanya kuvakirwa mukutenderedza hurukuro.
Tinogona kuputsa chimiro chenyaya yemushandisi se:
Rondedzero pfupi yezvinodiwa
Nhaurirano dzinoitika panguva yekushambidzika kwekuseri uye kuronga kwekusimbisa kusimbisa ruzivo
Miedzo yekugamuchirwa inosimbisa kupedzisa kunogutsa kwenyaya
Chinhu chakakosha kufunga nezvacho kana uchinyora nyaya dzevashandisi ndechekuti zvakanyorwa kubva pamaonero emushandisi anozoshandisa chigadzirwa, nekudaro zvakakosha kuti isu tizive zvakajeka kuti ndiani mushandisi pakunyora nyaya dzevashandisi.
Sei Kunyora Akanaka Mushandisi Nhau
Semutemo wechigunwe, yakanaka mushandisi nyaya inofanirwa kutevedzera kune INVEST chidimbu:
Ini ndependent - nyaya dzevashandisi hadzifanirwe kuvimba neumwe neumwe kuti vagone kugadziridzwa mune chero hurongwa.
N inogona kuenzaniswa - Dzivisa zvakawandisa; vachengete vachichinjika kuitira kuti timu igone kugadzirisa kuti yakawanda sei nyaya yekushandisa.
V zvinokwanisika - iyo nyaya inofanira kupa imwe kukosha kune vashandisi vayo.
IS zvinokurudzira - timu inofanirwa kukwanisa kufungidzira nyaya yacho.
S zvitoro - nyaya dzevashandisi dzinofanirwa kuve diki zvakakwana kuti dzikwane mune yekumhanya; nyaya hombe dzakaoma kufungidzira nekuronga.
T estable - simbisa izvo zviri kuvandudzwa zvinogona kuongororwa uye kuyedzwa zvakakwana.
Ndeipi Fomati Inoshandiswa Kunyora Nhau dzeVashandisi?
Nyaya dzevashandisi kazhinji dzine fomati inotevera:
_Sa, ini ndoda kuitira kuti ._
Muenzaniso: Se a mutengi of abc.com, ini ndoda a login mashandiro kuti ndikwanise tsvaga nhoroondo yangu yeakaundi pamhepo .
Sezvambotaurwa, nyatso tarisa kune uyo mushandisi wechigadzirwa uye dzivirira generic basa re 'Mushandisi'. Kana iwe usingazive kuti vashandisi nevatengi ndivanaani uye nei vangangoda kushandisa chigadzirwa, saka unofanirwa kwete nyora chero nyaya dzevashandisi.
Chikamu chekutanga chemushandisi nyaya ndeye Rondedzero. 2-3 mitsara inoshandiswa kutsanangura chinangwa chenyaya. Ingori pfupiso yechinangwa.
Chinhu chakakoshesesa chenyaya yemushandisi nhaurirano dzinofanirwa kuitika dzichienderera mberi pakati peboka rekuvandudza, mutengi, Muridzi weChigadzirwa nevamwe vanobatanidzwa kusimbisa ruzivo rwenyaya yemushandisi.
Maitiro ekugashira anomiririra iwo mamiriro ekugutsikana ayo akanyorwa sezviitiko, kazhinji muGherkin (Yakapihwa, Rini, Ipapo) fomati. Maitiro ekugashira anopawo Tsananguro yeDone yenyaya.
Ndiani Anofanira Kunyora Nhau dzeMushandisi?
Muzviitiko zvakawanda, nyaya dzevashandisi dzakanyorwa ne Chigadzirwa Muridzi kana Muongorori weBhizinesi uye akaiswa pamberi pechigadzirwa kumashure. Zvisinei, hazvirevi kuti ibasa reMuridzi wechigadzirwa chete kunyora nyaya dzevashandisi. Muchokwadi, chero nhengo yechikwata inogona kunyora nyaya dzevashandisi, asi ibasa reMuridzi wechigadzirwa kuona kusarudzika kwenyaya dzevashandisi dziripo uye dzinoiswa pamberi.
Izvo zvakakosha, ndeyekuti mushandisi nyaya haifanire kubatwa kunge gwaro rinodiwa iro kana ranyorwa richazopihwa timu yekusimudzira kuti riitwe.
Nyaya dzevashandisi dzinofanirwa kuonekwa senzira yekukurudzira nhaurirano pakati peMuridzi wechigadzirwa neboka rekusimudzira, uye nekudaro zvinofanirwa kunyorwa pamwe chete panguva yezvigadzirwa zvemberi zvekushambadzira.
Mukana wekubatanidza timu yekusimudzira mukunyora nyaya dzevashandisi ndeyekuti kana paine zvipingaidzo zvehunyanzvi, zvinogona kusimbiswa pachine nguva mberi. Vanoedza vanogona kunyanya kuwedzera kukosha mukuvaka nzira dzinogamuchirwa dzekubvuma uye kuronga pamberi pezvinoda kuyedzwa uye sei.
Nhau Dzemushandisi Dzinofanira Kuve Zvakadzama Sei?
Nyaya dzevashandisi dzinotarisa pane kukosha kwevatengi.
Musiyano wekutanga pakati penyaya dzevashandisi uye mamwe mafomu ezvinodikanwa dudziro idanho rehuwandu Nyaya yemushandisi idimikira rebasa riri kuitwa, kwete rondedzero izere rebasa. Basa chairo riri kuitwa rakaburitswa kunze kuburikidza nekubatana kutenderera kutenderera nyaya yemushandisi sekuvandudzwa kwesystem.
Kana iyo rondedzero ikave yakanyanya kureba (kupfuura izvo zvinokwana pane index kadhi), iwe unofanirwa kutarisa zvakare nyaya yemushandisi. Zvichida kuti iwe urikuyedza kusanganisa zvakawandisa.
Rangarira kuti chinangwa chenyaya yemushandisi ndechekukurudzira kubatana. Izvo hazvina kuitirwa kunyora zvese zvebasa, sezvo zvinowanzoitika mune zvetsika zvinodiwa zvirevo.
Zvakare, ruzivo rwakawandisa murondedzero runogona kutungamira mukushayikwa kweruzivo munzira yekubvuma.
Usati wabvuma kushanda pane imwe nyaya, timu inofanirwa kunzwisisa maitiro ekugashira. Izvi zvakakosha pakuziva izvo zvinofanirwa kuitwa kuitira kugutsa nyaya yemushandisi. Maitiro ekugashira anofanirwa kuve akatsanangurwa zvakakwana kuti atsanangure kana nyaya yemushandisi yagutsikana, asi isina kunyatso tsanangurwa sekumisa kubatana.
Zvakajairika Kukanganisa Pakunyora Mushandisi Nhau
Yakanyanya kurongeka kana yakanyanya kuwanda. Varidzi vechigadzirwa vane vavariro dzakanaka vanowanzoedza kunyora zvakadzama nyaya dzevashandisi. Kana timu ikaona nyaya pakuronga iteration inoita kunge IEEE zvinodiwa gwaro, vanowanzo fungidzira kuti zvese zvese zviripo uye vanodarika hurukuro yakadzama.
Kunyora mushandisi nyaya dzeTechnical mabasa. Zvakawanda zvesimba reAgile zvinouya kubva pakuve nekushanda kwekuwedzera kwesoftware panopera yega yega iteration. Kana nyaya dzako dzichingova mabasa ehunyanzvi, hauwanzoguma nekushanda software pakupera kwega kwega, uye unorasikirwa nehunyanzvi mukuisa pekutanga.
Kurega hurukuro. Nhau dzakajeka nemaune kusati kwarongwa kweiteration. Kana iwe ukasvetuka yekugamuchirwa nzira yekutaurirana, unoisa panjodzi yekufamba nenzira isiriyo, uchishaya makesi kesi kana kutarisisa zvinodiwa nevatengi.
Iwe une chero matipi anogona kuwedzerwa kune iripamusoro ruzivo rwekunyora yakanaka mushandisi nyaya? Inzwa wakasununguka kuzviisa mumashoko.
foni yangu ine kambasi
dzese samsung galaxy note mafoni
Android Wear 2.0 yeAsus ZenWatch 2 kubuda ikozvino
Iyo yekutanga Samsung Galaxy J5 inowana Android 6.0.1 Marshmallow kugadzirisa gore rimwe mushure mekusunungurwa
'Hei Google' ichakurumidza kugonesa Google Mubatsiri pamafoni eApple
Maitiro ekudhawunirodha Disney + inoratidza uye mabhaisikopo ekuona kunze kwenyika
Tora Verizon & apos; s Pixel, iPhone 7 kana S7 ye $ 10 / mwedzi nemabhizimusi ekutengeserana
Kangani iwe fekitori yekumisazve foni yako? Mhedzisiro yePoll iri mukati!
Sei uye nei uchiremadza nekukurumidza kuchaja pafoni yako